भक्तपुरमा के हुन् थाल्यो यस्तो ? यस्ता डरलाग्दा घटना बाहिरिन थाले…? – List Khabar
Home / समाचार / भक्तपुरमा के हुन् थाल्यो यस्तो ? यस्ता डरलाग्दा घटना बाहिरिन थाले…?
भक्तपुरमा के हुन् थाल्यो यस्तो ? यस्ता डरलाग्दा घटना बाहिरिन थाले…?
admin December 25, 2021 समाचार Leaveacomment 137 Views
भक्तपुरका राम श्रेष्ठ (नाम परिवतन) को दैनिकी म’द्यपा’न गरेरै बित्छ । म’द्यपा’न गरी परिवारको अन्य सदस्यलाई शा’रीरि’क र मा’निस’क त’ना’व दिने भएकोले उनलाई छिमेकीको सहयोगमा सुधारगृहमा राखिएको छ। उनको दुई सन्तान र एक श्रीमती छन्
चार दाजुभाईमध्ये उनका एक भाई नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् । श्रेष्ठले म’द्यपा’न गर्ने भएकै कारण उनको परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत छरछिमेकले हेयका दृष्टिले हेर्छन । उनका भाईहरूले पनि जग्गाको साँध सीमाना मिच्ने र मा’नसि’क परिवारका सदस्यलाई त’ना’व दिने गरेका छन् । यस्तो दु’र्व्य’वहा’र सहन नसकेर उनकी श्रीमती प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन गइन् । तर, त्यहाँ साक्षी बस्ने कोही नभएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त, जगातीले केही कारबाही अघि नै नबढाएको उनले बताइन । अन्तत, उनको सो उजुरी त्यतिकै राखियो ।
दुवाकोटकी सीता थापा (नाम परिवर्तन) ले कृष्ण थापासँग वैवाहिक स’म्ब’न्धमा गाँ’सिन । उनीहरूको दुई छोरी पनि छन् । तर, पनि कृष्णले दोस्रो विवाह गरे । दोस्रो विवाहपश्चात् कृष्ण सीता र दुई छोरीको जिम्मेवारीबाट पछि हटे । यही कारण सीता श्रीमानसँग छुट्टिएर बसिन । सीतालाई उनका ससुराले करिब एक रोपनी जमिन नामसारी गरिदिए । तर, केही समय नबित्दै सीताको मृत्यु भयो । अहिले उनकी दुई छोरी मामाघरमा बस्दै अध्ययन गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूलाई बुबाले न त नागरिकता नै बनाईदिए न त आमाको नाममा भएको जमिन नामसारी नै । सोही जग्गा नामसारी गर्न पटकपटक उनीहरुको बाबुलाई आग्रह गरे पनि कुनै पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ । तर, कानुनी रुपमा मुद्दा हा’लेर जग्गा नामसारी गर्न खोज्दा केही आधार नभएको उनीहरूको दुखेसो छ ।
घटना–३सुडालकी रमिता श्रेष्ठका श्रीमान् दिनहु म’द्यपा’न गर्दै परिवारका सदस्यहरूलाई मा’नसि’क र शा’रीरि’क त’ना’व दिने गर्थे । पटकपटक प्रहरीमा उजुरी गरेर पक्राउ गर्न लगाए पनि भोलिपल्टै छाड्ने भएकोले श्रीमानमा प्रहरीप्रतिको डर नै हराइसकेको थियो । श्रीमानलाई मुद्दा हालम नै’तिकताले नदिँने । यतिकै राखम सहिसाध्ये छैन । उनले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय महिला दिदीबहिनीको सहयोगमा उहाँलाई सुधार्ने कोशिश गर्यौ र सफल पनि भयौँ । अहिले पहिलेको जस्तो पीडा सहनु परेको छैन ।
यी त केही मात्रै उदाहरण मात्रै हुन् । भक्तपुरमा यस्ता समस्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष तीन सय ६२ वटा उजुरी परेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा करिब दुई सयले बढी हो । परिसरको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष एक सय ६ वटा घटना दर्ता भएको थियो ।
यस वर्ष भक्तपुरमा मात्रै १७ जना बालिका र २४ जना महिला गरी ४१ जनामाथि कर णी भएको छ । यसैगरी, १० बालबालिकामाथि यौ’न’दु’र्व्य’व’हा’र र नौ जना वहुविवाह गरी १९ जना महिला पीडित भएको प्रहरीले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार ६ जनाको ह’ ‘त्या र ५८ जनाले देहत्याग नै गरेका छन् । यसैगरी, दुई सय आठ जना हराउनुका साथै एक सय ९० जना फेला परेका छन् । हराए ८० महिलामध्ये ७६ जनामहिला, ४७ पुरुषमध्ये ३७ जना, ३६ बालिकामध्ये ३३ र ४५ बालकमध्ये ४४ जना फेला गरेका छन् । विभिन्न स्थानबाट १३ व्यक्तिको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समयमा यस्ता घटना उच्च रुपमा बढेको छ। चिनजानका व्यक्ति तथा आफन्तबाट धेरै महिला पीडित भएको र केही घटना त स्थानीयले लुकाउने समेत गरेको उनले बताए । उनले कुनै पनि अ’प’रा’धका मुख्य कारण आर्थिक पक्ष जोडिएको बताउँदै रोक्न नसकिने बताए । उनले पीडितलाई आफन्तले रचनात्मक र मानवीय सहयोग नगर्ने बरु थप पी’डा दिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि हिंसा बढेको बताए ।भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पछिल्लो समयमा ४० प्रतिशत हिं सा बढेको बताए । उनले घरभित्र हुने हिं सा बढ्दै गएको र १८ वर्ष मुनिको बालिकाहरू बढी पी डित हुने गरेको बताए । वहुविवाह र बालवविाहका कारण उनीहरूबाट जन्मिएका धेरै बालबालिका जोखिममा परेको र आफ्नो पहिचान पाउन नसकेको बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षणका लागि घरघरबाटै सचेत हुनु पर्ने जोड दिए ।
Previous २ महिला र एक पुरुष यस्तो अवस्थामा भेटीए पुलिस आश्चर्य चकित…
Next नेपालमा पनि बज्याे ख`तराकाे घण्टी, थप एक जनामा ओ-मिक्रोन पुष्टि !